Printer amin'ny marika
Therma Transfer Series
Printer marika marika 4-Inch WP300B
Fetin'ny fararano (iray amin'ireo fety nentim-paharazana sinoa efatra)
Fetin'ny fararano, fantatra ihany koa amin'ny hoe Fetiben'ny Volana, tsingerintaona nahaterahan'ny volana, volana alina, fetin'ny fararano, Fetin'ny Fararano lohataona, Fetin'ny fanompoana volana, Fetiben'ny YueNiang, Fetiben'ny Volana ary fetibe fihaonana, izay fety nentim-paharazana teo amin'ny vahoaka sinoa. Ny Festival Mid Autumn dia nanomboka tamin'ny ...
Ahoana ny fanontana pirinty mafana?
Ny fitsipiky ny mpanonta mafana dia ny manarona sosona sarimihetsika mangarahara amin'ny akora miloko maivana (mazàna taratasy) ary mamadika ny loko ho loko mainty (amin'ny ankapobeny mainty na manga) aorian'ny fanafanana mandritra ny fotoana iray. Ny sary dia vokarin'ny fanafanana sy ny fihenan'ny simika ao amin'ilay sary. Ity rea simika ity ...
Desktop Thermal Barcode Printer Printer
Desktop Thermal Label Printer Desktop Thermal Label Printer dia tena mety amin'ny fanontana labozia fandefasana, marika ho an'ny fampiharana antsinjarany, fanaraha-maso ny fananana na fijanonan'ny fanamoriana kely izay mitaky volan'ny pirinty ambany. Matetika antsoina hoe mpanonta marika fandefasana, mpanonta amin'ny birao, ...
4 amin'ny Printer Thermal Thermal tsara vidy amin'ny 2021
Manana fahalianana te hahafantatra momba ny mpanonta thermal tsara indrindra hividy amin'ny 2021 ve ianao? Azonao atao ny mahita mora ny antsipirian'ny mpanonta. Raha mila manonta labels sy rosia ianao dia ho hitanao fa mora ampiasaina ity mpanonta printy mafana ity raha mbola mividy. Ary betsaka ny zavatra tsy maintsy hataonao ...
Amin'izao fotoana izao, ny mpanonta mafana dia be mpampiasa kokoa, ary koa manana asa bebe kokoa. Ka mpanonta hafanana iza no mety aminao? Betsaka ny karazana sy ny asan'ny mpanonta eny an-tsena ho an'ny safidinao, ny sasany amin'ny tapakila fanontana, ny sasany amin'ny marika fanontana, ary ny sasany ...
Rehefa mampiasa mpanonta kaody fanaovana pirinty dia manaova pirinty ny taratasy tsy misy fangarony ity olana ity dia olana mahazatra. Indrindra ao amin'ny mpanonta barcode taorian'ny nanovana ny taratasy misy fehikibo na fehikibo karbonina, ny mpanonta barcode dia mora mitsambikina tranga na olan'ny taratasy banga maro, ary ...
Pringting Mode Switch an'ny WP-Q2A
Salama eyeryone, amin'ity herinandro ity aho dia hitondra anao mpanonta mafana WINPAL kintana: mpanonta finday mafana WP-Q2A. WP-Q2A dia mpanonta maody indroa mahery 2-inch tonga miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 100 mm / s Max. Safidinao tsara izany raha ...
Fahaiza-manao fikojakojana pirinty mafana sy teboka fiheverana
Thermal Printer dia fitaovana elektronika ilaina amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy maninona any amin'ny birao na an-trano. Ny mpanonta termal dia an'ny fanjifana kojakoja, ny akanjo tara ary ny fanjifana dia lehibe tokoa, noho izany dia tokony hitandrina isika amin'ny fiainana andavanandro. Ny fikojakojana tsara, ny androm-panompoana dia ho lava kokoa, ny mainty ...
Ho avy tsy ho ela ny Festival Dragon Boat, fialantsasatra nentim-paharazana sinoa. Ny Fetin'ny Sambo Dragon dia latsaka amin'ny andro fahadimin'ny volana fahadimy, izay amin'ny 6.14 ihany koa amin'ny kalandrie masoandro. Araka ny fampandrenesana momba ny fialan-tsasatra nasionaly, ny WINPAL dia hanana fialantsasatra amin'ny 12 Jona amin'ny 14 Jona a ...
Ahoana ny fomba hametrahana ireo kofehin'ilay mpanonta hafanana WP300A
WP300A dia misy amin'ny famindrana mivantana na mafana na hafanana, misy processeur 32-mahery mahery ho an'ny marika haingana mandritra ny fahatsiarovan-tsary 4MB, 8MB SDRAM, mpamaky karatra SD ho an'ny fanitarana fahatsiarovana Flash, hatramin'ny 4 GB ho fampitomboana ny fitahirizana fo .. .
Fanontam-pirinty fandraisam-bahiny 80mm, Printer mpanovo, Mobile Printer, Printer finday, 80mm mpanonta fandraisana, Fanontam-pirinty Thermal,